Kik Messenger ho an'ny PC - Sintomy amin'ny Windows 10 - Ahoana No
Ahoana ny fampidinana Kik Messenger amin'ny PC?
Kik messenger dia azo antoka fa iray amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra malaza indrindra. Raha chatterbox ianao ary tia miresaka amin'ny namanao dia ity no fampiharana tsara indrindra ampiasaina. Raha atao teny hafa, ny fampiharana dia mamela anao hifandray amin'ny namanao mora foana ary manana endrika maro natao hahaliana ny resaka.
Fomba tsara indrindra ampidinana Kik amin'ny PC:
Misy fomba roa hampidina Kik amin'ny PC-nao:
Mampiasa Android Emulator
Tsy misy fomba fampidinana.
Sintomy ny Kik Messenger Mampiasa emulator Android:
Inona no atao hoe Android Emulator? Android Emulator dia lozisialy mamela anao hampiasa fampiharana Android amin'ny PC-nao. Ny rindrambaiko dia mahavita mihazakazaka OS Android virtoaly ho an'ny Windows sy Mac OS koa. Amin'ny teny tsotra, ny emulator Android dia manampy amin'ny famoronana fametrahana izay mamela anao hanahaka fitaovana Android amin'ny PC-nao.
Download Android Emulator tsara indrindra ho an'ny PC:
Ity dia iray amin'ireo emulator Android malaza indrindra. Izy io dia samy manana kinova fikandrana na mac. Hanoro hevitra anao tokoa izahay hampidina sy hampiasa Bluestacks satria maimaim-poana tanteraka izy io ary manana interface interface-friendly izy io.
Ka, namoaka ny kinova farany vao haingana i Andyroid izay tena nanjary nalaza tokoa. Raha ny marina dia maro ireo mpampiasa Bluestacks no nanomboka nampiasa Andyroid satria manana endri-javatra mahavariana izy ireo.Ny kinova maimaim-poana an'i Andyroid dia manana ny zavatra rehetra ilainao hampiasa Kik amin'ny ankapobeny amin'ny PC amin'ny solosainao Windows na Mac.
Dingana hametrahana Bluestacks ho an'ny Windows:
Rehefa avy nisintona tamim-pahombiazana ny Bluestacks na emulator ianao, dia mila apetrakao izany.Araho ireto dingana manaraka ireto hametrahana ny emulator:
Mandehana any amin'ny lahatahiry izay nakarinao sy nitahiry ny fisie Bluestacks na ny emulator.
Avy eo, kitiho indroa ny rakitra azo ampiharina mba handrosoana bebe kokoa.
Miandrasa ny mpamosavy fametrahana anao hitarika anao amin'ny fizotrany.
Araho ny torolàlana aseho eo amin'ny efijery mba hamenoana ny fizotry ny fametrahana.
Raha vantany vao nametraka ny emulator Android tamim-pahombiazana ianao, ny dingana manaraka dia ny fandefasana azy.
Ireto misy dingana tokony harahinao:
Tadiavo ny kisary Bluestacks eo amin'ny biraonao ary kitiho eo aminy na emulator hafa azonao alaina ary kitiho ny kisary.
Raha tsy hitanao ny kisary, tsindrio ny bokotra Start ary kitiho ny Bluestacks na ny anaran'ny emulator ao amin'ny bara fikarohana.
Tsindrio ny safidy mety hanombohana ilay rindrambaiko
Azonao atao koa ny manindry ny Start> All Programs> Bluestacks
Ny emulator voafantina dia hisokatra ary handeha amin'ny PC.
Sintomy ny Kik amin'ny Windows Mampiasa Bluestacks:
Aorian'izany dia mila misintona ny Kik .APK File ianao.Rehefa tonga ny fotoana fametrahana Kik amin'ny solosainao. Araho ireto dingana manaraka ireto hanaovana izany:
Mitadiava Kik .APK fisie ao anaty fampirimana izay nitahirizanao ny fisie raha nisintona ny APK tamin'ny solosainao ianao.
Tsindrio indroa ny rakitra APK ary miandrasa kely.
Ny Bluestacks na ny emulator hafa dia hanomboka ary hampandeha ny mpitondra hafatra KIK ho azy.
Tsindrio havanana amin'ny .APK ary safidio hisokatra miaraka amin'ny.
Hisy varavarankely vaovao hiseho eo amin'ny efijery ahafahanao misafidy programa hanokafana ilay rakitra.
Safidio ny anaran'ny emulator anao amin'ny safidy misy.
Aorian'izany, kitiho OK raha hametraka Kik amin'ny PC-nao.
Afaka miditra amin'ny Kik fotsiny ianao izao ary manomboka miresaka amin'ny namanao.
Tsy misy fomba fampidinana:
Azonao atao aza ny misafidy ny safidy tsy misintona izay tsy ilainao ny misintona emulator Android.Ny tombony azo amin'ny fomba fampidinana No:
Tsy mila manahy momba ny habaka kapila ao amin'ny PC ianao satria tsy mila fametrahana izany
Mila mpitety tranonkala fotsiny ianao hampiasa Kik instant messenger
Afaka mampiasa fampiharana Android tsy tambo isaina amin'ny solosainao ianao nefa tsy mampiasa emulator.
Maninona ianao no tokony hampiasa Kik amin'ny PC?
Kik Messenger dia fampiharana fandefasan-kafatra mahagaga sy malaza. Raha tianao ny mifampiresaka amin'ny namanao dia ity no fampiharana tsara indrindra ampiasaina. Amin'ny teny tsotra, ity app ity dia ahafahanao mifampiresaka amin'ny namanao mora foana, ary manana endri-javatra tsy manam-paharoa maro izay natao hahaliana ny resaka.
Endri-javatra amin'ny fampiasana Kik ho an'ny PC:
Manana traikefa amin'ny chatting tsy manam-paharoa izy:Kik for PC dia rindrambaiko tena miavaka amin'ny fomba iray izay tonga miaraka amina endri-javatra mahavariana sasany izay manolotra traikefa tsy manam-paharoa miresaka amin'ny mpampiasa azy.
Horonan-tsary miaraka amin'ny olona:Ity fampiharana ity aza dia mamela anao hanao antso video nefa tsy misintona fampiharana hafa toy ny Skype, WhatsApp, na Facetime. Izy io koa dia miaraka amin'ny resaka video.
Asao ny namanao:Azonao atao ny manasa ny namanao hampiasa an'ity rindranasa ity hiresahana amin'izy ireo, azonao atao ny manasa azy ireo amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra, media sosialy, na mailaka ary mangataka azy ireo hiresaka aminao ao amin'ny Kik messenger amin'ny fotoana rehetra.
Notifications:Isaky ny mandefa na mandray hafatra amin'ity rindranasa ity ianao dia hisy fampandrenesana hiseho eo amin'ny efijeryo.
Hafatra multimedia:Tsy natao ho an'ny hafatra an-tsoratra ihany fa afaka mandefa emoji, Gif, sary, ary sary koa ianao.
Kik Code:Ny mpampiasa Kik rehetra dia samy manana ny kaody Kik mampiavaka azy ireo izay mora hita eo amin'ny kiheba fikirakirana. Raha te-hijery ny kaody dia tsindrio ilay kisary fikarohana ary kitiho ny safidy Mitadiava olona. Safidio avy eo ny safidy Scan a Kik Code handroso bebe kokoa.
Bot Shop:Noho izany, raha tsy manana olona hiresahana amin'ny Kik ianao dia afaka mifampiresaka amin'ny an'i Kik fotsiny. Raha ny marina dia endri-javatra lehibe ho hitanao amin'ny Kik for PC ity. Ity fampiasa ity dia ahafahanao miresaka sy milalao lalao ary mankafy sy miditra amin'ireo vaovao farany indrindra amin'ny fampiharana sy ireo hetsika hafa koa.
Fiarovana manokana:Rehefa mampiasa Kik ianao dia tsy mila miahiahy momba ny fiainanao manokana satria afaka mijanona tsy fantatra anarana ianao rehefa miresaka amin'ny PC-nao, ary koa ny resaka dia tsy misy atahorana afa-tsy aminao.Azonao atao koa ny manova ny anaranao ary manangana kaonty vaovao ihany koa. Izy io koa dia manana fiasa mamela anao hanakana ireo fifandraisana tsy ilaina.
Chat amin'ny vondrona:Ao amin'ny Kik Messenger, ianao koa dia ho afaka hamorona vondrona amin'ny fampiharana ary hanome anarana azy io araka ny safidinao. Avy eo ampio mpikambana ao amin'ilay vondrona ary manomboka mifanakalo hevitra miaraka. Azonao atao koa ny mitady vondrona tianao hahaliana anao ary angataho izy ireo hanampy anao ao amin'ilay vondrona.
Interface ho an'ny mpampiasa:Ity rindrambaiko ity dia manana interface interface-friendly izay ahafahanao mampiasa ilay app raha tsy mila karazana tutorial ianao. Tsy mila manontany olona akory ianao amin'ny fomba fampiasana ilay fampiharana. Ny hany mila ataonao dia ny misintona sy mametraka azy ary manomboka miresaka amin'ny namanao.
Azonao atao ny mamerina ireo hafatra taloha:Azonao atao ny mamerina mora foana ireo hafatra tranainy kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasa amin'ny tantara ao amin'ity fampiharana ity. Io dia hahafahanao mamerina hafatra hafatra manan-danja izay tsy tianao ho very.
Fomba fanamboarana:Tokony ho fantatrao fa ity no fampiharana voalohany nampiditra fampiasa namboarina izay ahafahan'ny mpampiasa manamboatra ny endrika sy ny fahatsapan'ilay fampiharana arakaraka ny safidiny.Azonao atao ny manova ny pejin-dresaka amin'ny fampiasana lohahevitra firesaka izay omena ao amin'ny fampiharana. Azonao atao mihitsy aza ny mametraka feon-telefaona fampandrenesana ho an'ny fifandraisana manokana.
Na Bluestacks na Andyroid dia samy manana ny asany mahavariana. Azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireto emulator ireto mba hisintomana sy hampiasa Kik Messenger ary koa fampiharana hafa izay mety tianao amin'ny PC-nao tsy misy olana. Azonao atao koa aza ny misafidy ny No Download Method raha tsy tianao ny mampiasa emulator. Araka izany, rariny loatra raha milaza fa ny fitaovana roa dia ampiasaina tsara hanampy anao hampiasa KIK Messenger ho an'ny Windows.
Fampidinana maimaim-poana Roblox (2020) - Ahoana ny fametrahana
Andao ho fantatra momba ny vanim-potoana Bosch faha-8
milalaova minecraft maimaimpoana an-tserasera voasakana
aiza no ahafahako mijery andian-tsarimihetsika an-tserasera maimaimpoana
paoma mozika switch ho an'ny mpianatra
voaloa amin'ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet
te hisoratra anarana amin'ny netflix aho